Motorola MOTOROKR S305 ekweisi Bluetooth | Akụkọ akụrụngwa
Motorola MOTOROKR S305 ekweisi Bluetooth
Cinthia Ruth | | Ngwa
Motorola gosiputara egwuregwu ohuru ya ekweisi ikuku stereo MOTOROKR S305. Dị ka ndị ọzọ, ha na-eji profaịlụ Standard Bluetooth maka njikọ na ngwaọrụ ndị dakọtara na ịnweta akara ngosi stereo na njikwa. Ogwe 30mm (ihe dị ka anụ ọhịa 1,2) maka nke ọ bụla nke ntị ntị dị oke ma nyefee ọtụtụ egwu, na-enye n'otu n'ime mpụga mkpuchi njikwa maka igodo usoro, njikwa olu na oku.
Igweisi ahụ na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ịkpọ oku ekwentị, egwu na-akwụsị mgbe oku batara na-akpaghị aka mgbe oku mechara. Motorola kwuru na MOTOROKR S305 dakọtara na ihe karịrị 200 Bluetooth ekwentị.
Ha na-abịa na a batrị lithium ion batrị Ọ na-enye oge 6,5 nke oge okwu, oge 6 nke egwu egwu na oge 100 nke oge njikere.
Enweghị ozi ọ bụla na ọnụahịa ahụ, mana amaara na ekweisi MOTOROKR S305 ga-adị na mbido Eprel.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Motorola MOTOROKR S305 ekweisi Bluetooth
Kedu ka m ga esi choputa udiri ụdaolu nke zte s305 ekwentị biko kọwaa carme m nwere ekele
Nzaghachi maria villamizar villamizar
Ndewo, m ga-achọ ikwu maka ekweisi motorola s305, nke e jiri ya tụnyere ụdị ole na ole dị n'ahịa dị mma, ebe ọ bụ na site na imewe, ogo dị mma na ọnụahịa ha na-asọ mpi n'ahịa, ekele
Ha na arụ ọrụ dị ukwuu na ekwentị m, ma mgbe ọtụtụ awa nke na-agbalị, enweghị m ike iji ha na Windows PC. Enweghị ozi dị na nzukọ Motorola, enweghị ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ha anaghị aza na hotlines ha.
Zaghachi David S
Ana m akwado ha, ọ bụ ezie na ha na-efu m nnukwu ego ebe a na Peru, mana naanị m na-agwa gị na anyanwụ ọ bụla nke na-akwụ ụgwọ ekweisi bara uru, ezigbo ọdịyo dị mma, blọtọ Bluetooth dị mma, ha na-echegharị nke ọma na ihe ọma ha nwere bụ na na oku ha na-ege ntị na nyocha abụọ ahụ nke nwere obi abụọ na ọ bụ ha kacha mma maka m ...
Ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma karịa ndị ọzọ na m na-eri ya na-eri onye ọ bụla hụrụ ha na-eme ihe ọ bụla m kpọrọ kpọọ naanị na m nwedịrị ike iji ya na pc ma ọ bụrụ na m nwee ihe ịga nke ọma, m ga-agwa gị ebe m mere
Zaghachi Jun Pablo
Ngwa a nwekwara ike rụọ ọrụ dịka poolu redio ?????
nde .. M zụtara ha obere oge gara aga ma ha dị oke mma, ejiri m ya na lg c-305 ekwentị ma ọ dị mma.
Iji jiri ya na pc ị ga-etinye ihe omume bluesoleil ma debe ihe ntanetị Bluetooth na ọdụ ụgbọ mmiri na voila, ọ na-ada ezigbo mma ma batrị dị ogologo oge ...
Ngwaọrụ a anaghị arụ ọrụ iji gee ntị na ọnọdụ redio ya na ekwentị ebe ọ bụ na eriri isi okwu dị ka poolu.
ekele maka ama ahụ iji ya na PC Achọrọ m ijikọ ya
Ndewo, mmadụ nwere ike ịgwa m ma ha na Nokia N80 rụkọọ ọrụ
Nnọọ. Ego ole ka ọ bụ ụgwọ? Ahapụrụ m ya ka ọ na-akwụ ụgwọ n'abali niile site na 21 ruo 06 achọghị m imebi batrị ahụ, ị ​​nwere ike ịgwa m? Daalụ nke ukwuu!!
Jụọ ya max 2 awa, ọkụ uhie na-apụ mgbe ọ dị ala na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ọ dị njikere na maxx, ọ bụrụ na ị ka nwere ya
M na-eme. Azụtara m na ihe niile enweghị impeccable mana mgbe obere oge karịa ọnwa abụọ ọ malitere ịnụ nke ọma mana bass na obere olu dị oke njọ. Ma ọ dịghị ada ụda ka ha meghee ihe gara aga
Ihe dị ka Victor-10 mere m. Igwe isi na-adị jụụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Anaghịzi m arụ ọrụ ha arụ, amaghị m ma enwere ike idozi ya ma ọ bụ na m ga-atụfu ha. Echiche ọ bụla?
bara uru na ekweisi? Mgbe ndụ bara uru a batrị ion ion lithium gwụchara, enwere ike ịgbanwe ya maka nke ọhụrụ?